Mejọọ 7 You'll ga-eme na Arụ Ọrụ Marketingzụ | Martech Zone
CMO mmefu ego na-ebelata, ebe ndị ahịa na-agba mbọ na ntozu oke gbasara ego, dị ka Gartner si kwuo. Na nyocha nke ọma banyere itinye ego ha na mbụ karịa oge ọ bụla, ndị CMO kwesịrị ịghọta ihe na-arụ ọrụ, ihe na-adịghị arụ, yana ebe ha ga-eji dollar ọzọ ha ga-aga n'ihu na-ebuli mmetụta ha na azụmaahịa ahụ. Banye Njikwa Arụ Ọrụ Ahịa (MPM).
Gịnị bụ Nrụ Ọrụ Azụmaahịa?
MPM bụ usoro nke usoro, teknụzụ, na omume nke ndị otu ahịa na-eji eme atụmatụ maka ịzụ ahịa, nyochaa nsonaazụ megide ebumnuche ndị emebere, yana ịme mkpebi ndị ọzọ nwere mmetụta.
Agbanyeghị, taa, naanị 21% nke ụlọ ọrụ nwere ikike ịghọta n'ụzọ zuru ezu onyinye ahịa na ntinye ego, dị ka Allocadia's 2017 Arụ Ọrụ Ntozu oke ọmụmụ ihe. Nnyocha a gwuru n'ime nsogbu ahụ na mkparịta ụka qualitative na ndị na-eduga CMO yana nyocha sara mbara.
Isi ihe ịga nke ọma anọ nke ndị na-ere ahịa na-arụ ọrụ dị elu
Na mkpokọta, ebe ụlọ ọrụ ahụ ka nwere nnukwu ọrụ iji meziwanye nnabata na ntozu oke nke MPM, e nwere ndị isi otu na-esetịpụrụ ndị ọgbọ ha ụkpụrụ.
Anyị achọtara ọtụtụ ihe ịga nke ọma maka ndị ahịa a na - arụ ọrụ dị elu:
A siri ike na-elekwasị anya na isi arụmọrụ data; ntinye ego, nloghachi, na echiche dị iche iche nke data dịka ROI.
Iji teknụzụ eme ihe mgbe niile n’ụwa niile, na ijikọ n’etiti akụkụ ha niile.
Jiri nlezianya hichaa data.
Nnwale nke gosipụtara uru ha bara na azụmaahịa na ebumnuche ya.
Ọmụmụ ihe ahụ kpughere isi mmejọ asaa dị iche iche na-eme dịka ọ metụtara MPM:
Oké na-bụzi ihe mgbe ochie na nkà na ụzụ - Otu ahia na-adabere na ihe ọhụrụ nke usoro CRM nke oge a. Ejiri usoro ERP jikwa ego ruo ọtụtụ afọ. Agbanyeghị, 80% nke ndị otu na-eji Excel n'ụzọ ụfọdụ iji chọpụta mmetụta Marketing na azụmaahịa a. Ọmụmụ ihe anyị chọpụtara na 47% nke ndị otu anaghị eji ọ bụla nzube e wuru teknụzụ ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ma ọ bụ njikwa ego (ọrụ ndị isi nke Ọrụ Nlekọta Ahịa). N'ụzọ dị iche, ndị otu toro eto na-enyere gị aka Arụ Ọrụ Nchịkwa Arụ Ọrụ 3.5X na-abụkarị karịa ndị nwere uto dị larịị ma ọ bụ na-adịghị mma.
Ihe nha ahia ndi di mfe ọ bụghị na-arụ ọrụ - Nnyocha anyị chọpụtara na ọ bụ naanị 6% nke ndị na-ere ahịa na-eche na nha ha na-enyere aka chọpụta ihe ahịa ahịa kachasị mma. Nke ahụ hapụrụ 94% nke ndị anyị na-amụ na-enweghị ntuziaka ederede banyere ebe ha ga-eji obere mmefu ego na akụrụngwa ha.
Njirimara nke MPM dị nnọọ iche na nke ahịa mmesho. Ọ bụrụ nha ahịa B2B na-anọchi anya ihe onye ọkwọ ụgbọ hụrụ na enyo anya ụgbọ ala, mgbe ahụ MPM na-arụ ọrụ dị ka ọkụ ihu na ụzọ nke ụgbọ ala n'onwe ya nke na-eme ka ọhụhụ na njikwa maka onye ọkwọ ụgbọ ala. Allison Snow, Onye nyocha Ọkachamara, Forrester
Nkọwahie n'etiti Marketingzụ ahịa na azụmahịa - Ndị ụlọ ọrụ na-atụ anya karịa uto ego 25% ga-enweta okpukpu abụọ nwere ike ịnwe ọkwa ọkwa CMO na-egosi ntinye azụmaahịa azụmaahịa. Businesseslọ ọrụ ndị a dị elu nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 2.5X karịa òtù ndị na-adịghị arụ ọrụ iji hụ ma ahịa na ahịa data mgbe niile ma ọ bụ na-agbakọkarị na ebumnuche ụlọ ọrụ ahụ. Nke ahụ pụtara na ndị isi na MPM nwere ọrụ nkwụnye ego nke azụmaahịa na-arụ ọrụ mkpọchi na ebumnuche ụlọ ọrụ.
Nsogbu mmekọrịta CFO na CMO - Organizationslọ ọrụ kachasị mma n'ọmụmụ ihe anyị bụ 3X nwere ike ịhazi ọrụ nke Marketing na Finance. Agbanyeghị, naanị 14% nke ụlọ ọrụ azụmaahịa niile hụrụ Ego dịka onye mmekọ ntụkwasị obi atụkwasara obi, yana 28% enweghị mmekọrịta na ego ma ọ bụ kwuo naanị mgbe a manyere ha. Nke a dị oke egwu dị ka ahịa na-arụ ọrụ iji nweta mmefu ego kwesịrị ekwesị, yana ọ na-egbochi echiche nke Marketing dị ka akụkụ nke azụmaahịa. Ntụkwasị obi nke CFO dị oke mkpa na CMO taa, n'adịghị ka ndị na-eme obere ọrụ, nyocha anyị chọpụtara na ụlọ ọrụ ndị na-eto eto dị elu na-arụ ọrụ na Ego iji soro itinye ego na nha nha (57% ma e jiri ya tụnyere 20% nke ụlọ ọrụ nwere ogo dị njọ / adịghị mma). Ha nwekwara ike ịhazi ego na nha nke mmefu ego na nloghachi (61% ma e jiri ya tụnyere naanị 27% nke ụlọ ọrụ ndị na-enwe mmụba ma ọ bụ na-adịghị mma.)
Ulo oru na-adighi nma, mmefu ego, na nhazi data - Ogo data (metụtara itinye ego, mmefu ego, na atụmatụ) bụ ihe ịma aka dị n'etiti ndị otu, nke na-egbochi ịkọ akụkọ na ikike ịme mkpebi ahịa ka mma. Naanị 8% nke ndị otu nwere ahịa, ahịa na data data na otu ụlọ nkwakọba ihe data nke na-eme dị ka “otu isi iyi nke eziokwu.” na naanị 28% na-eche na ahịa data a na-aza maka nke ọma (nke a gụnyere 8% mbụ).
Enweghi visibiliti n'ime usoro usoro - Naanị 50% nke nzukọ na-akọ na ị nwere ọhụụ, ma ọ bụ ka mma, n'ime usoro ahịa azụmaahịa. 13% nke ndị ahụ kọrọ na ha amaghị ọbụna ebe data ha niile dị na enweghị ike ịgba ọsọ akụkọ ọ bụla. Ouch.
Ojiji nke Martech - Ndị ụlọ ọrụ na-ejikọ ọnụ na teknụzụ gafee ụlọ ọrụ ahịa ha niile bụ 5X nwere ike ịhụ 25% + uto ego karịa ndị nwere uto ma ọ bụ na-adịghị mma (57% vs. 13%). akpaaka n'elu ikpo okwu karịa atọ dị iche iche na-ere gafee nzukọ) na-eme ka a dị iche. Ihe dị ka 60% nke ụlọ ọrụ ndị na-atụ anya mmefu ego na-abawanye karịa 10% na-ekwupụta na ojiji nke teknụzụ ahịa gafee nzukọ ga-abụ mgbe niile ma ọ bụ na-agbanwe agbanwe, ma e jiri ya tụnyere 36% nke ndị nwere mbadamba na uto na-adịghị mma. nwere nghọta doro anya ma ọ bụ dị mma nke ụzọ ahịa teknụzụ ahịa ha, ihe dịka 70% nke ndị nwere ebumnuche adịghị mma.
MPM Okwu nye CMO ọ bụla
Ahịa ahịa ga-eleba anya na nzukọ ha dị ka azụmaahịa, ọ bụghị naanị ọrụ. Ha aghaghi ichota ego obula iji mee ka oru ndi otu ha karie ma gosiputa mmetuta ha.
Ndị isi ụlọ ọrụ na-atụ anya na ndị CMO nwere ike nyochaa ọfụma etu ahịa si enyere aka na akara ala. Mgbe CMO nwere ohere ịnweta data, ihe niile na-agbanwe. Lee CMO Jen Grant anya, na a N'ajụjụ ọnụ na nso nso a na CMO.com
Ndị CMO nwere ihe ịga nke ọma na nke a na-enweta ntụkwasị obi na ntụkwasị obi nke ndị ọgbọ ha, yana nchekwa iji mata mbọ ha na-atụle ma jiri ya kpọrọ ihe. E nyefere ndị dara iwu ka ha nara iwu na imezu, karịa ịkọwa ma na-edu ndú. Iji mụtakwuo banyere MPM:
Budata Akụkọ Ndepụta Ntụle zuru ezu
Tags: allocadiandị na-ere ahịa dị eluJen Grantakara ngosi ntozu ahianjikwa arụmọrụ ahịaire ahia ntozumpm